Hello Nepal News » मेस्सीले यो सिजनपछि बार्सिलोना छाड्न सक्ने !
मेस्सीले यो सिजनपछि बार्सिलोना छाड्न सक्ने !
स्पेनिस बार्सिलोनाका कप्तान लिओनल मेस्सीले क्लबसँग सिजन २०२०–२१ को अन्त्यसम्मका लागि सम्झौता गरेका छन् । यसको अर्थ सम्झौताका हिसाबले उनी अझै डेढ वर्ष बार्सिलोनामा रहनेछन् । बार्सिलोना उनीसँग सो सम्झौता लम्ब्याउने कसरतमा छ । यदि त्यसो भए मेस्सीको बसाइ थप लम्बिन सक्छ ।
तर, अर्जेन्टिनाका लिजेन्ड खेलाडी तथा हाल अर्जेन्टिनी राष्ट्रिय फुटबल टिमको निर्देशक केसार लुइस मेनोट्टीले भने मेस्सीका लागि बार्सिलोनामा यही सिजन अन्तिम हुन सक्ने बताएका छन् । अर्जेन्टिनाको टेलिभिजनसँग कुरा गर्दै उनले बार्सिलोनाले यो सिजन कसरी बिताउँछ भन्ने कुराले मेस्सीको बसाइ निर्भर गर्ने बताए ।
यदि यो सिजन बार्सिलोनाले घरेलु लिग ला लिगा र च्याम्पियन्स लिग दुवै हारेको खण्डमा मेस्सीले क्लब छाड्ने प्रबल सम्भावना रहेको मेनोट्टीले बताएका छन् । बार्सिलोनाले लगातार युरोपियन उपाधि पनि जित्न नसक्नु र यसपटक घरेलु लिग पनि गुमाए मेस्सी निराश बनेर क्लब छाड्ने निर्णयमा पुग्ने बताए ।
‘मेरो विचारमा मेस्सीले बार्सिलोनाबाटै सन्यास लिन सक्छन् । तर, त्यसका लागि टिमले उपाधि र मेस्सीले ठूला अवार्डहरू जितिराख्नुपर्छ । यदि टिम उपाधिविहीन हुन थाल्यो भने मेस्सीको बहिर्गमन निश्चित छ,’ मेनोट्टीले भनेका छन्, ‘बार्सिलोनामा अहिले धेरै कुरा ठीक दिशामा गइरहेका छैनन् ।’
मेनोट्टीले यदि जारी सिजन बार्सिलोनाले प्रमुख उपाधि हार्ने हो भने मेस्सीका लागि यही सिजन नै अन्तिम हुन सक्ने बताए । ‘मलाई लाग्छ, यदि यो सिजन बार्सिलोनाले घरेलु लिग र च्याम्पियन्स लिग दुवै हारेको खण्डमा मेस्सीका लागि यो नै अन्तिम सिजन हुन सक्छ । किनभने, लगातार ठूला उपाधि हारेर बार्सिलोनामा बसिरहनु उनका लागि लज्जाको विषय हो ।’
मेनोट्टीले मेस्सीको एकपटक आफ्नै देशको क्लबबाट खेल्ने इच्छा रहेको पनि बताए । ‘मेस्सी बार्सिलोना छाडेपछि एकपटक आफूले बाल्यकालमा फुटबल सिकेको क्लबबाट खेल्न चाहन्छन्, यो निकै सुन्दर कुरा हो । यदि त्यसो भए यसले घरेलु समर्थकलाई ज्यादै खुसी बनाउने छ,’ मेनोट्टीले भने ।
प्रकाशित मिति २१ पुष २०७६, सोमबार १३:२९